काठमाडौमा मेट्रो रेल सञ्चालन गरिने | Arthatantra.com
अब बिदेशिने कामदारको बिमा रकम दोब्बर हुने काठमाण्डौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको बिमा रकम बढाएर १० लाख रूपैयाँ […]
भारतबाट थप १ सय ४५ मेगावाट विजुली आउने,अब देश लोडसेडिङमुक्त हुन्छ त ? काठमाडौ । भारतले नेपाललाई १ सय ४५ मेगावाट विजुली उपलब्ध गराउने भएको छ। हालै निर्माण […]
अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्मचारीलाई सेयर दिन नपाउने ! काठमाण्डौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निश्कासन गर्दा […]
स्थानीयले नै निर्माण गरिदिए प्रहरी चौकी सिन्धुपाल्चोक । भुकम्पले प्रहरी चौकी ध्वस्त भएपछि स्थानीयको सक्रियतामा भुकम्पको एक […]
उपत्यकामा अब ठूला बस मात्र चल्ने, साना सवारी हटाइँदै काठमाण्डौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातमा पुरानो नीतिगत निर्णय पुनरावलोकन गर्दै उपत्यकामा […]